Ixesha lokufika eGuadalupe liyasebenza ngoko nangoko ngenxa yodushe lwasekuhlaleni
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Ixesha lokufika eGuadalupe liyasebenza ngoko nangoko ngenxa yodushe lwasekuhlaleni
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
IGuadaloupe ingena phantsi kweXesha lokubuya
Ummandla waseFransi phesheya eGuadaloupe ubekwe phantsi kwexesha lokufika ekhaya namhlanje emva kweentsuku ezi-5 zodushe kunye nobundlobongela. Isiseko solu dushe kungenxa yemithetho ebekwe ngurhulumente ye-COVID-19.
Ngubani oxhasa lo mlo ngokuchasene nemigaqo? Imibutho yabasebenzi emele oogqirha kunye nabacimi-mlilo baza kugwayimba ngoMvulo bekhalazela ukugonywa okunyanzelekileyo kwe-COVID-XNUMX kwabasebenzi bezempilo kunye neemfuno zokupasa kwezempilo.
I-France iza kuthumela ngaphezulu kwe-200 yamapolisa kwesi siqithi emva kokuba uqhanqalazo lube nobundlobongela kunye nemiqobo eguqulwayo kunye nokutshiswa komlilo, kubandakanya neemoto, ezinokukhokelela kwiziphumo eziyingozi.
Ixesha lokufika ekhaya elibekwe ngurhulumente kwaye njengoko lichazwe nguAlexandre Rochatte, umphathi weGuadaloupe, kwaye njengoko ibhengezwe yiofisi yakhe kwi-Twitter, ixesha lokufika ekhaya livala yonke into ukusuka ngentsimbi yesi-6 ukuya kweyesi-5 kusasa. Okuqukiweyo kulo myalelo kukwalela ukuthengiswa kwepetroli kwiitoti zejeri.
Utshilo umsebenzisi we-Twitter @DylanJolan: “Abantu banomsindo kwaye umsindo kufuneka uphume. Ichasene nesibophelelo sesitofu kodwa ibinokuba ngokuchasene nayo nayiphi na enye into. Emva kokuba umsindo ubonakalisiwe, abantu baya kuhamba isitofu sokugonya kuba ayikho enye indlela yokuphuma.”
Kuyabonakala ukuba, olu dushe alubangelwa yimigaqo ye-COVID-19 kuphela, njengoko abemi beqhankqalaza ngokuchasene neemeko zokuphila ezimbi.
“Imeko emaxongo kakhulu e #Guadeloupe. Izithuthi ezixhobileyo ze-gendarmerie zithunyelwe ukuba zikhuphe imiqobo yendlela, ngolu suku lwesihlanu logwayimbo olungenasiphelo ngokuchasene nococeko kodwa ngokubanzi ngokuchasene neemeko ezimdaka zokuhlala, utshilo @AnonymeCitoyen kwi-Twitter.
Iimeko ezimbi zaxhaswa ngabanye kumajelo asekuhlaleni. @lateeyanacadam uthe kwiposti ye-Twitter: "Akukona nje ukudlula ucoceko, ukufikelela kumanzi asebenzayo, umama wam owayedla umhlala-phantsi kwafuneka ahlawule i-tank yamanzi asebenzayo 2000 € ngelixa ehlawula amatyala amanzi nyanga zonke! Ihlazo lechlordecone! Amaxabiso aphezulu ngokugqithisileyo kubemi abanemivuzo ephantsi!”
"Yonke inkxaso yam kubemi baseGuadeloupe, abanesibindi sokulwa lo rhulumente ukhokelela kubuzwilakhe kunye nobukhoboka, masithembe ukuba imvukelo yabo iya kubavusa abemi baseMetropolitan France," @meline2804 ibhalwe kuTwitter.
Kwingxelo edibeneyo eyenziwe nguMphathiswa wezangaphakathi waseFransi uGerald Darmanin kunye noMphathiswa wezaNgaphakathi u-Sebastien Lecornu namhlanje, omabini amagosa avumile kwaye athi "balugxeka kakhulu ubundlobongela obenzeke kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo. eGuadeloupe. "
IFransi ithumela amapolisa angaphezu kwama-200 kumhlaba ophesheya eGuadeloupe ukuya kunceda kule ngxaki.